सिल्टल: सबैभन्दा धेरै विकिपीडिया लेख
जूलिया वशिनावा, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छिन् कि कूल फ्रेक्स विकिपीडिया क्लब एक प्रमुख र प्रसिद्ध फेसबुक समूह हो। यसले सबै भन्दा ठुलो, अजीब र फ्रीकीस्ट विकिपीडिया लेख उद्धार गर्छ। 52- हेट्ज व्हेलदेखि तार्रायरसम्म, सबै सदस्यहरूको फेसबुक समाचार फिडहरूमा उपलब्ध छ। सेप्टेम्बर 2013 मा यसको स्थापना पछि यो समुह ठूलो मात्रामा बढेको छ र 30,000 भन्दा बढी सक्रिय सदस्यहरूको समुदाय बन्यो। यहाँ हामीले सबैभन्दा मनपर्ने र भर्खरै विकिपीडिया लेखको बारे कुरा गरेका छौं।
केंटकी मासु शावर
यो एक भयानक यौन कार्य होइन तर असामान्य मौसमको घटना होइन। मार्च 1876 मा बाथ काउन्टी, केन्टकीमा, टुक्रा मासु विशेष गरी बीफले धेरै मिनेटको लागि 100 गजबको क्षेत्रमा घुमाउँथ्यो। पछि, टुक्राहरू घोडाको फेफड़ोंको ऊतकको रुपमा चिनिन्थ्यो।
बलबापको रानी दक्षिण अफ्रिकामा थियो। उहाँलाई बादल र वर्षामा नियन्त्रण भएको थियो। वर्षौंको लागि, सिंहासन खाली छ किनभने वर्षा रानी को अवैध बच्चाहरु को बारे मा विवादहरु र मोददजाजी को अद्वितीय र अजीब जीवन शैली को आलोचना को बारे मा विवादहरु को कारण।
यो कवि र तिब्बती बौद्धले उनीहरूलाई राक्षसहरूलाई सुरक्षात्मक देवताहरूमा परिणत गर्ने शक्ति थियो जसलाई तिनीहरूलाई थन्डरबोल्टको फ्लामिंग बुद्धि भनिन्छ। कुन्नी भूटान को पर्खालहरुमा पेंटिंग फेलियस को ईस्टोरिक प्रविधिहरु को लागि पनि मशहूर छ। Source - asset equipment appraisals.
Joyce Carol विन्सेंट
क्यारल विन्सेन्टको मृत शरीर उनको लन्डनको अपार्टमेटमा फेला पर्यो, जो अजीब र असामान्य देखेर मृत शरीर तीन वर्ष भन्दा बढीको लागि त्यहाँ झरेको थियो। किनकि सबै बिल स्वतः स्वचालित रूपमा भुक्तानी गरिएको थियो, तिनको टेलिभिजन र तापनि चलिरहेको थियो, र उनको भाडाको भाग पनि भुक्तानी गरिएको थियो, सबैले विश्वास गर्थे कि जोसिज जीवित थियो। उनको मृत्यु अघि दिन, यस जवान महिलाले आफ्ना आफन्त र साथीहरुसँग सम्पर्क काटेका थिए।
यो जर्मन केटा खाएको व्यक्तिको हत्या र खानेकुराको लागि प्रसिद्ध भए। उनले साइटमा एक विज्ञापन पोस्ट गरेको थियो, दैनबिल क्याफे, जहाँ मीइइजले बताए कि उसले कसैलाई हेर्ने र उपभोग गर्न खोजिरहेको थियो। बर्लिनको एक व्यक्ति, बर्नड JР "С ?? रेजेन अरमेन्डो, ले आफ्नो विज्ञापनको जवाफ दिए र मेईईजले ब्रान्डको लिंगामा उत्तेजित गर्यो र यसलाई पकाएको छ।
जेनिफर र जून गिबन्स
तिनीहरू सुन्दर जुत्ताहरू थिए जसले एक-अर्काको आलोचनालाई चमत्कार गरे र एकअर्कालाई बोलेका थिए कि कसैले कसैलाई बुझ्न सकेनन्। विभिन्न स्कूलहरूमा तिनीहरूलाई पठाएर तिनीहरूलाई अलग गर्न प्रयास गरिसकेपछि, जुलुसहरू catatonic भए र आफूलाई स्वतन्त्र नभएसम्म उनीहरूले जीवनभरको लागि पुनर्मिलन गरे। चाँडै, तिनीहरू अपराधी हुन्थे र अस्पतालमा पठाइयो, जहाँ तिनीहरूले चौध वर्ष बिताए।
जर्ज हेर्मिमन 20 औं शताब्दी को सर्वश्रेष्ठ र प्रसिद्ध अमेरिकी कार्टून विशेषज्ञ थिए। त्यो कुकुर काटी नामक हास्य पट्टी को लागि प्रसिद्ध थियो। उनले आफैलाई ग्रीकको रूपमा पहिचान गरे, तर जन्म प्रमाणपत्र जर्जको रूपमा मिश्रित जाति जातिको साथमा राखिएको छ।
अब्देल सबैभन्दा लोकप्रिय र उल्लेखनीय अरब र मिस्र गायक थिए। उनी अरबी संगीतको संस्थापकको रूपमा मानिन्छ, र तिनको संगीतले 1977 को मिस्रका विद्रोहलाई प्रेरित गरे। उनले 1978 मा आत्महत्या गरेका थिए, र संसारले बिग पिम्पिन कहिल्यै हेलिम बिना गरेन।